Mawduuca, Sawirada kaliya - Geofumed
Janaayo, 2009 topografia
Tani waa magaca koox ay leedahay Facebook oo xubnahooda ay u heellan yihiin inay soo diraan sawirro wanaagsan oo sawirro iyo sawirro ah oo ay ku jiraan farsamoyaqaanada ama farsamoyaqaanada.
Waxaa la iga codsaday fasax in aan isticmaalo sawirka meesha gabdhaha ayaa soo baxaya isku deyeyso in la dhigo soodhaweynta; Tani waa sida aan u ogaaday in kooxdu jirtay.
ka Waxaan kugu martiqaadayaa inaad ku biirto iyo marka aan dhaafo waxaan ka tagayaa sawirro xiiso leh, sidoo kale fiiri sababtoo ah waxaan u maleynayay in aan arko in badan oo waji yaqaan ah ... waxaan rajeynayaa in boosaska aan saldhig u ahayn, hehe.
Kuwa rumeeyey in xaaladooda shaqo ay tahay mid khatar ah ...
Maxaa ... ma aha tan ...?
Waxaan isku qoraa fadhiga
Papo, halkan waxay u muuqataa in uu yahay awoowe Jorge, haddii ay u muuqato sida ay u joogsato.
Eeg sawirro badan
Post Previous«Previous Geofumadas on duulimaadka, January 2009
Post Next Sannad ka mid ah nidaaminta ayaa i sugayaNext »
3 Jawaabo "Muuqaalka, Muuqaalka kaliya"
angie paola isagu wuxuu leeyahay:
aad u roon
xomeer isagu wuxuu leeyahay:
Sergio de jesus chavez lopez isagu wuxuu leeyahay: